मेयर साहेब ! नगरबासीलाई कोरोनासँगको युद्ध जीताउनुस्, फेरी अर्को चुनाव जित्नुहुनेछ – Mayorkhabar.com
मेयर साहेब ! नगरबासीलाई कोरोनासँगको युद्ध जीताउनुस्, फेरी अर्को चुनाव जित्नुहुनेछ
Mayor Khabar २४ चैत्र २०७६ ११:५६	No Comments कोरोना भाईरसनिजगढ नगरपालिकासुरेश कुमार खनाल
चाईनाको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाईरस अहिले महामारीकै रुपमा विश्वभरी डढैलोझै फैलिरहेको छ । आजका दिनसम्म त्यस्तो कुनै दमकल तयार भएको छैन, जसले कोरानाको डढेलो निभाउन सकोस् ।
नेपालमा पनि चाईनाको वुहान शहरबाट आएका १ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । तर उनी निको भएर घर फर्किसकेका छन् । निको भएका १ जना सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या ९ पुगेको छ । अहिलेसम्म पुष्टि भएका सबै संक्रमितहरु हवाई मार्गबाट नेपाल आएका थिए । तर शनिबार सुदुरपश्चिममा भारतबाट आएका २ जना र कतारबाट भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै धनगढीस्थित घरमा आएका ४ औं संक्रमितको ३४ वर्षिया महिला आफन्तमा कोरोना भटिएपछि स्थिती थप भयावहतर्फ धकेलिने खतरा देखिएको छ । स्थानीय महिलामा कोरोना देखिएपछि भारतबाट नेपाल आएका अनुमानित एकलाख नागरीकहरु कस्तो अवस्थामा छन ? उनिहरुबाट आफन्त र स्थानीयमा कोरोना सर्यो भने कस्तो अवस्था आउला ? भन्ने प्रश्न ट्टकारोरुपमा उठ्न थालेको छ ।
कोरोनाले मानव अस्तित्व माथिनै निरन्तर प्रहार गरिरहदा एकपछि अर्को चमत्कारीक आविस्कार गरिरहेको शक्तिशालि विज्ञान पनि आजका दिनसम्म निरिह जस्तै दखिएको छ । हालसम्म विश्वभर १२ लाख ८२ हजार २ सय ८५ भन्दा बढिमा कोरोना संक्रमण देखिदा ६९ हजार ६ सय ४९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ लाख ७३ हजार ५ सय ३६ जना कोरोनालाई जितेर सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छन् ।
यो समस्यालाई कावुमा लिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहले खेल्न सक्छन् । नगरपालिका संघले पनि स्थानीय तहलाई अन्यत्र मुलुकबाट आएका नागरीकहरुको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आव्हान गरिसकेको छ । कतिपय नगरपालिकाले विवरण तयार गरेर अन्य मुलुकबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखीसकेका छन् भने कतिपय विवरण संकलन गरिरहेका छन् । संकलित विवरणका आधारमा सरकारले कोरोना परिक्षण गर्ने दायरालाई थप फराकिलो बनाई तत्काल त्यस्ता शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन अलिकति मात्रै ढिलाई भयो भने कोरोनाले महामारीको रुप धारण नगर्ला भन्न सकिन्न ।
देश नयाँ संरचनामा गइसकेपछि सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापले कोरोना नियन्त्रण गर्ने सवालमा निकै महत्वपुर्ण अर्थ राख्दछन् । शनिबार एकैचोटी ३ जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि सरकारले १२ देखी २५ गतेसम्म घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि पुनः थप गरेको छ ।
लकडाउनले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र नै धरासयी भइरहदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर रोजीरोटीको जोहो गर्ने वर्ग प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । संघ र स्थानीय सरकारले राहतका कार्यक्रम त ल्याउदै छन् । तर लकडाउन शुरु भएको दुई हप्ता पुग्नै लाग्दा त्यो मजदुरी नगरी चुलो नबल्ने विपन्न वर्गको दैनिकी कसरी धकेलिदैछ भन्ने हिसाव किताब शायद निकालिएको छैन । स्थानीय तहहरुले वितरण गरेको राहत प¥याप्त हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था पक्कैपनि छैन ।
राहत वितरणको नयाँ शैली
लकडाउनमा त्यस्तो तोकिएको काम ठ्याक्कै नभएकाले प्राय मोबाईलमा कोरोना अपडेट हेरिनैरहेको हुन्छु । फेसबुकका पाना सार्दै गर्दा झट्ट आँखा अडिए, एउटा फोटोको माथी लेखिएको थियो, ‘खाद्य सामग्री बितरणमा नयाँ शैली’ । बाराको निजगढ नगरपालिकाको ८ नम्बर वडा कार्यालयले राहत वितरणमा यस्तो नयाँ शैली अपनाएको रहेछ । बकैया नागमणी सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष रविराज दंगालले निजगढ नगरपालिका ८ नम्बर वडा कार्यालयसँगको सम्नवयमा आफ्ना अतिविपन्न ‘घ’ वर्गका २०० उपभोक्तालाई बनको कोषबाट राहत सामग्री वितरण गरिएको बताउनुभयो ।
चामल, नुन, तेललगायतका खाद्यान्न सामग्री निश्चित दुरी कायम गरी खुल्ला मैदानमा भाग लगाएर राखिएको छ । र स्थानीय पालैपालो आफनो भाग लिएर जादै गरेको तस्विरमा प्रष्ट देखिन्छ । कोरोनाबाट बच्न अर्को व्यक्तिसँग निश्चित दुरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने बुझेकोले मलाई पनि यो राहत वितरण शैलि बडो गज्जव लाग्यो ।
विश्वसनीयतालाई थप मजबुत बनाउन निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनालज्यूलाई मेयर खबरका लागी फोन गरे । मेयर खनालले राहत वितरण मात्र होईन कोरोना रोकथामका लागी नगरपालिकाले गरेका कार्यहरुको बेलिबिस्तार लगाईदिनुभयो ।
नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा ५ देखी ७ बेडसम्मका क्वारेन्टाईन हाउस निर्माण गरिसकेको रहेछ । प्राथमीक स्वास्थ्य केन्द्र निजगढमा ५ बेडको आईसोलेशन, स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरेर नगरवासीको स्वास्थ्य स्थितीको दैनिक रिपोर्ट, अन्य मुलुकबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाईनमा राखिएको र राहतका लागी खाद्यान्न सामग्री खरीद गरिसकिएको र अव वितरण गर्ने तयारीमा रहेको मेयर खनालले जानकारी दिनुभयो । म फेरी आफ्नै जिज्ञासामा फर्किए, मेयरज्यू, राहत वितरण त्यसरी नै गर्नुहुन्छ त ? मेयर खनालको जवाफ आयो, ‘त्यो तरिका सुरक्षित छ । अन्य तरिकाहरु पनि अपनाउछौं । जे होस् स्थानीयको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राहत वितरण गर्छौं ।’
राहत वितरण हुनु आफैमा निकै खुशीको कुरा हो । तर बाराको निजगढ नगरपालिकाले जस्तो नगरी स्थानीयको हुल जम्मा पारेर राहत वितरण गर्ने हो भने यसले कोरोना फैलने मार्गहरु थप प्रसस्त बनाईदिन सक्छ । त्यसैले सुरक्षित तरिकाले राहत वितरण गर्न निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ८ को यो तस्विर गतिलो सिकाई बन्नसक्छ ।
हरेक नगरपालिकाका मेयरले यो महामारीलाई चुनौती भन्दा बढी अवसरकारुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो सुरक्षालाई समेत उच्च प्राथमीकतामा राखी नगरबासीलाई कोरोनासँग लड्नसक्ने इच्छाशक्ति, चेतनाको विकास, सुरक्षाका सामग्री र विपन्न वर्गको चुलो ननिभ्ने अवस्था सिर्जना गर्न यदि मेयरज्यूहरु सफल हुनुभयो भने जनताले कोरोनालाई जित्नेछन् । तपाईँहरुले फेरी अर्को चुनाव जित्नुहुनेछ ।
Previous Previous post: हरिवन नगरले खडा गर्यो २५ लाखको प्रकोप व्यवस्थापन कोष
Next Next post: पाटन अपडेट : स्वास्थ्यकर्मीलाई ६० प्रतिशत भत्ता वृद्धि, मृत्यु भए १० लाख, श्रमिकलाई राहत
बैंकिङ कारोवारका लागि सैनामैनाले तोक्यो समयसिमा २४ चैत्र २०७६ ११:५६
नगरपालिका संघ गण्डकी प्रदेशद्वारा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण २४ चैत्र २०७६ ११:५६
क्वारेन्टिन कुर्दाकुर्दै वडा अध्यक्षले गुमाए ज्यान २४ चैत्र २०७६ ११:५६
काठमाडौंलाई स्वस्थ राख्नेहरुको स्वास्थ्यप्रति कोकाकोला–क्रिएसनको चिन्ता २४ चैत्र २०७६ ११:५६
भेरीका मेयर कुट्पिट गर्ने शाही पार्टीबाट निस्कासित, मेयर भन्छन्– युवा बिग्रिए देश बिग्रन्छ, सहीमार्गमा ल्याउने जिम्मा हाम्रै हो २४ चैत्र २०७६ ११:५६